I-Maine Fall Foliage Indawo yokuhlala kunye ne-Autumn Getaway Packages
Eunited States Maine
Ukulungiswa kweeLafisi zeeLeaf eMaine
by UKim Knox Beckius
Uhlala phi eMaine Ngethuba leNyanga yamaTsha
Uya kufuna ukuya kwiindawo ezisenyakatho nakumaphandleni eMaine ukwenzela ukuba ikhefu lokuwa lihle kakhulu. Ngeke ufune ukulawula ngokupheleleyo ukuhlala kufuphi nxwemeni, nangona kunjalo, njengamaxabiso angalindelekanga-amaxesha atholakala ngokuwa. Nazi ezinye zezona zikhethileyo zokuwalala kwamaphepha ama-Maine kunye neepakheji zokukhupha i-autumn:
Iindawo zeNxweme zaseMaine azizona ndawo ezilungileyo zokubona amahlamvu awa, kodwa eli liVictoria Inn e-Rockland lisenokukhetha ukuwa.
Ngoba? Iindleko zokungenisa izindlu zifikeleleka (ngokukodwa emva ko-Oktobha), kunye neepekhi ezizilungelelanisa ngokuhlwa rhoqo, awuyi kukwazi ukulinda ukuze ubuyele apha emva komhla wokuqhubela kweendawo ezihamba phambili.
Ihotele yaseBethel Inn
I-Bethel Inn ifumaneke kwidolophana eqhelekileyo eBethel, eMaine , enye yezona zinto zisekhaya ezisemgangathweni ezifunwa ngamahlamvu. Kukhethiweyo ukulala okufanelekileyo kunye nemisebenzi yesikhenkethi, kubandakanywa igalofu, i-tennis kunye nokubhukuda (ichibi elingaphandle liyakhutshwa unyaka wonke).
Iinqanawa ze-Birds kwi-Moosehead Ichibi e-Rockwood, eMaine, yindawo enhle yokuvula kwaye ubukele amaqabunga aguquka. Hlalani kwelinye lezakhiwo zokuzonwabisa ezinonophelo, i-marshmallows enqabileyo ecaleni komlilo wakho ebusuku, hamba kwi-moose cruise okanye i-paddle ejikeleze ikhefu elihle kakhulu, kwaye uhlole ezinye zee-Maine ezihamba phambili ezihamba phambili ezivela kummandla ongasentla, kufuphi ne-New England ukuya kwindawo ekhethekileyo yokuvota amaqabunga kuma-Award of Choice Awards.
Ukuze ube nolwazi olunyanisekileyo lwe-New England, hlala eHarraseeket Inn ngexesha lokuwa kwamahlamvu. Eyona ndawo ifumaneka kwi-Freeport, eMaine, iibhloko ezimbini kuphela ukusuka kwi- LL Bean i-storeship esitolo , i-inn egcwele i-antique enee-fireplaces ezingama-23, iindawo zokutyela ezimbini ezahlukileyo kunye ne-pool yangaphakathi. Nangona ukuwa kwamahlamvu akusebenzisanga, uya kuba nomkhombandlela wokukhumbula.
Lodge Lodge e Moosehead Lake
I-Lodge e-Moosehead Lake inikezela ngamagumbi ayisithoba adibeneyo kunye nama-suites apheleleyo kunye nee-Jacuzzis ezimbini kunye neenqwelo zomlilo. Uza kufumana amaqabunga amacwecwe angamaqabunga kwiindawo ezikude nakwiindawo eziqhelekileyo ze-Moosehead Lake, kodwa awuyi kubingelela into xa kuziwa kukududuza kunye nokunethezeka xa ubhala ukuhlala kule ndlu ye-boutique.
Ngaphambili okokuqala i-MBNA yokufuduka kwenkampani, le ndlu ekuphumeni kuyo kufuphi neCamden, eMaine, yabuyiselwa kwakhona ngo-2009 njengenqwelomoya ye-cabin resort. Uya kujikelezwa ngamahektare angama-379 amaqabunga ama-autumn aseluhlaza kwaye ujabulele amathuba amaninzi okuzonwabisa - ukusuka kwi-kayaking yolwandle ukuya ku-bowling-xa ubhala ukuwa kuhlala kwindawo enye, emibini okanye emithathu yokulala. Ngamnye uxhotyiswe ngendawo yokucima umlilo ngokuhlwaya okunyanisekileyo ekupheleni kosuku lokubhloka kwekwindla.
Point Sebago Ihotele
Kutholakala kumanxweme aseLeebago eNingizimu yeMaine, le ndawo ye-campus e-775 ithetha ngokuwa kweeveki zokugcina, ezinye zeentsapho kunye nabanye abadala kuphela. Hlalani kwenye yezindlu zeholide zePallo Sebago, amakhaya epaki, ii-resort cottages okanye abahamba ngeendlela zokuhamba, okanye bazise i-trailer yakho okanye i-RV.
Amachibi aseRangeley athandeka ekuwa, kwaye iRangeley Inn ikubeka entliziyweni yazo zonke.
Indlu yokulala yaseklasini yamkele iindwendwe iminyaka engaphezu kwe-100, kwaye ukususela ngo-2013, abanini abatsha baye batyala imali ekuphuculweni nasekuhlaziyweni.
Jabulela ukuphunyuka kwe-gourmet eWings Hill Inn eBelgrade Lakes, eMaine, apho abagcini bezindlu zakwaChristopher noTracey Anderson bobabini beCulinary Institute of America baphumelele. Indawo yokuhlala kunye neendawo zokutyela zihlala kwindawo yokufama yase-200 ubudala.
I-Autumn yakho kwiNdlunkulu yaseNew England
Ukukhangela iNew England entsha ifumaneka ukuphefumlelwa kokuhamba kwamahlamvu? Qala nge- New England amaPlantshi aseMntla , apho uza kufumana konke okufunekayo ukucwangcisa ukuphepha okungazibalekiyo.
Izinto ezonwabileyo zokwenza eKennebunkport With Kids
Thetha Njenga-Mainer: I-Master i-Accent neMaine Amazwi
Igalari yeSithombe: uKennebunkport iKrisimesi Prelude
Ukuphonononga: I-Meadowmere Ihotele eOgunquit, Maine
I-LL Ubhontshisi: Uneminyaka eyi-100 ubudala engazange ihambe
I-Popham Ibhitshi eMaine
Usuku lomhlaba eMontreal 2017
I-Ariel Sands Cottage Colony Ihotele ukuze ibuye kwakhona eBermuda
6 Iimpawu zokuvakashela eShimmla kwiNdwendwe yokuHlola
Iikholeji ezi-7 eziMnandi zokuThengisa ukuthenga ngo-2018
IGeorgeown Waterfront Park
I-Santa Barbara Gay Pride 2016 - I-Festival Pride ye-Pacific 2016
Segovia, eSpain Umcebisi wohambo
Ukutyelela kweeQueens, eNew York kubaTyeleli
Iimfihlelo ze-Grand Central Terminal
Matshi Imozulu, iMikhosi kunye neMicimbi eFlorida
I-Newest Restaurant Row e-New Orleans yi-Freret Street
Isikhokelo soKhuseleko seZiko leYosemite
Yenza-Yakho: Izixhobo Zokuhlamba Izilwanyana Ezizimeleyo
Kuphi ukutya umkhwa lo nyaka